Recology CleanScapes | Baqshadaha Macluumaadka Goobaha La Deggan Yahay ayaa boosta lagu dirayaa
Nabadeey SeaTac! Recology CleanScapes ayaa ku faraxsan inay siiso adeegyada qashinka, dib-u-warshadaynta, iyo qashinka cuntada & ardaaga lagaga qaado deggenayaasha SeaTac laga bilaabo Juun 1, 2014.
Diyaargarow ahaan, Recology CleanScapes ayaa kuu soo diri doonta "Baako Soodhawayn" Mey. Baakada Soodhawaynta ayaa waxa ku jira macluumaad ku saabsan adeegyada iyo sicirrada, tilmaamaha dib-u-warshadaynta iyo qashinka cuntada iyo ardaaga, iyo jadwalka qashin ka qaadka.
Bixiyahaaga adeegga ee xaadirkan ayaa qaadi doona qashinka ilaa dhammaadka Mey. Recology CleanScapes ayaa bilaabi doonta qashin qaadka muddada ah toddobaadka Juun 1 adiguna waad ku sii wadan doontaa isticmaalkaooda isla gawaari-gacmeedkii hore. Hase yeeshee, haddii aad isticmaalayso weel qashin aad adigu iska leedahay hadda, si toos ah ayay CleanScapes idinku keeni doontaa gaari-gacmeed cusub oo le’ekaan u dhigma leh. Recology CleanScapes ayaa kaartiyadaada iyo weelashaada qashinka dib-ugu-astaamayn doonta macluumaad cusub gudaha Juun.
Haddii aad wax su'aalo ah ka qabto biilal ku dallaca ama weyddiisyada adeegga heeganka ah kahor Mey 31, fadlan kala xiirir Republic Services taleefanka 800.221.4508 .Haddii aad jeceshahay in lagaa beddelo cabbirka gaari-gacmeedkaagakaddib kaddib Mey 18keeda fadlan la xiriir Recology CleanScapes. Weyddiisadyada isbeddellada mugga gaari-gacmeedkaaga ayaa la oofin doona kaddib Juun 2eeda.
Haddii aad wax su'aalo ah oo ku saabsan adeegyadaada cusub ee Recology CleanScapes aad qabto, fadlan nagala soo xidhiidh 206.767.1166 ama seatac@recology.com.